I-china enokuphinda isetyenziswe kwakhona iingxowa zegusset mveliso kunye nabathengisi | NGOKUPHAKAMILEYO
Iingxowa ezinokuphinda zenziwe ngokutsha zeGusset.I-gusset idala ubunzulu obongezelelweyo kunye namandla emveliso. Ipakethi inokwenza ibhloko esezantsi. Amacala amane abonelela ngemveliso eyomeleleyo yokufaka uphawu.
Izinketho zethu zangoku zibandakanya ukungathinteli kunye nomqobo Yima isingxobo esinezi zibonelelo zilandelayo:
Iingxowa ezinokuphinda zenziwe ngokutsha zeGusset.Isakhiwo esiqinisiweyo sebhegi yesitywina se-quad siyenza ibonakale inomdla kwishelufa yevenkile.
Iipotshi ezisecaleni ze-gusset zincinci njengebhokisi, oko kuthetha ukuba zihlala zithatha indawo encinci eshalofini. Ezi ngxowa zezi ukhetho oludumileyo lwe umhlaba okanye imbotyi yekofu iyonke kunye nokupakishwa kwe nut. I-gusset esecaleni yandiswa emva kokuba izaliswe ziimpahla, yenze ukuba ime nkqo kwishelufu. Umngxunya wokuxhoma ikwaluphawu olulungileyo kwezi ngxowa zokufumana ukuboniswa kweshelufu kwivenkile enkulu. Inesakhono esihle kakhulu sokugcwalisa izinto kunye nomgangatho omkhulu wokuprinta.
Ingxowa ezinokuphinda zisebenze ezinokuphinda zisebenze ezinokuphinda zisebenze mhlawumbi zisetyenziswa ngokubanzi ekupakisheni amashwamshwam kunye nezinto ezomileyo ezinje ngamandongomane, iicookies kunye neembotyi zekofu. Kodwa ezi zikhwama zenza izisombululo zokupakisha ezinkulu zokutya okungumkhenkce kunye neemveliso zobuhle. Ukuguquguquka kunye neempawu zesiko ezikhoyo kunye neebhegi zethu zegusset ezisecaleni zibonelela ngeendlela ezizezakho zokuxhasa umzekelo obekekileyo ophawulwe luphawu lwakho.
Iibhegi ezinamacala amabini zonyusa umthamo wokugcwaliswa kwengxowa ovumela ukuba ingxowa ibambe imveliso kunye nobunzima. Oku kongeza ubhetyebhetye ngakumbi xa ujongene neemveliso ezinkulu okanye ezime ngendlela engaqhelekanga.
Ukususwa kwemiphetho ebukhali, kunika ukusetyenziswa okungcono kwabathengi.
Ukuncitshiswa kweGusset / iLip enye-inika intetho ebhetele ngakumbi kune-gusset evulekileyo ngokupheleleyo, ikwenza ukuba kube nokuvalwa ngeendlela ezahlukeneyo.
gqiba isilungiseleli seglosi
Yenza umthengi akwazi ukuvula ipakethe ngaphandle kokusebenzisa isikere.
(Cinezela i-PTC ukuvala) Iitraki ezahlukeneyo ezizodwa, eziphindwe kabini nezithathu, kunye / ukuphuma kwesandi ngemibala eyahlukeneyo.
Yenza ukuvulwa okuthe tye okucocekileyo okupakishe, ngomzamo omncinci.
Izintso ezingaphelelanga-Ukuthuthwa ngokulula kwemveliso.
Ukugqiba iVarnish ebhalisiweyo
IiVarnishes ezibhalisiweyo, zibonelela ngematriki kunye nokugqitywa kwe-gloss kuyilo, ke iimveliso / abaqulunqi banokwenza i-oack ebonakalayo.
Ukuya kuthi ga kwi-10 Colors
Ukunikezela ngoshicilelo oluphezulu kwi-flex okanye kwi-gravure.
Ngokuvalwa okuqhubela phambili kwenza ukuba kube lula kubathengi ukuvula nokuvala iifomathi ezinkulu, kunye nomkhondo obonakalayo ophazamisayo.
Kwipakethi efanayo, unokuba nolwakhiwo olwahlukileyo lwe-laminate, ekusebenzeni, uyilo kunye nokukwazi ukuba nefestile yemveliso.
Izinto zokuthambisa kunye noKhathalelo lobuqu
Imizi-mveliso nokunye ukupakishwa
Amashwamshwam, Amandongomane kunye noMxube woMzila
Egqithileyo Ukuphinda usebenze kwakhona kwifilimu
Okulandelayo: Ezinokuphinda zisebenze zenze iipokotshi
Iipakethi ezibunjiweyo / iipokotshi ezimiliselwe ipakethe yokutya ...
Iipakethi ezineziciko ezintathu kunye neeplastikhi zokucoca ...